ချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့် Zhechi Electric၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုရှိသော on-grid ဆိုလာစနစ်အတွက် PV ပေါင်းစပ်သေတ္တာဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Intertek မှ CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီပါသည်။ MOQ သည် 1 pc ဖြစ်သည်။
Discount Solar Distribution Junction Boxes Quotation ကိုဝယ်ယူပါ။
Solar Distribution Junction Boxes မိတ်ဆက်ခြင်း။
1. နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်တွင်၊ ချိတ်ဆက်လိုင်းကိုလျှော့ချရန်၊ လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်၊ ဆုံးရှုံးမှုများလျှော့ချရန်၊ စနစ်တည်ဆောက်ပုံအား ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်၊ ပစ္စည်းများ၏ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် PV ပေါင်းစပ်ဘောက်စ်သည် များသောအားဖြင့် ဆိုလာပြားများနှင့် အင်ဗာတာကြားတွင် လိုအပ်ပါသည်။
2. PV လမ်းဆုံ လုပ်ဆောင်ချက်မှလွဲ၍၊ pc ပေါင်းစည်းဘောက်စ်တွင် ပြောင်းပြန်လျှပ်စီးကြောင်းကို ကာကွယ်ခြင်း၊ လက်ရှိကာကွယ်ခြင်း၊ ဗို့အားလွန်ခြင်း ကာကွယ်ရေး၊ လျှပ်စီးကြောင်း ကာကွယ်ရေးစသည်ဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များ ဆက်တိုက် ပါရှိသင့်သည်၊ ထိုအချိန်တွင်၊ လည်ပတ်နေသည့် အခြေအနေ၊ လက်ရှိ၊ ဗို့အားကို စစ်ဆေးခြင်း လမ်းဆုံပြီးနောက် ပါဝါ၊ အဖမ်းခံအခြေအနေ၊ DC circuit breaker အခြေအနေ နှင့် Arc detection၊ leakage detection (optional) အစရှိသည်ဖြင့်။
3. ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သည့် PV ပေါင်းစပ်သေတ္တာတွင် ဆိုလာပါဝါစနစ်များ အစုံအလင်ပြုလုပ်ရန် on-grid/off-grid solar inverter ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံး တပ်ဆင်ထားပါသည်။
4. PV ပေါင်းစည်းသည့်ဘောက်စ်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ၊ အင်ဗာတာ၏ input dc ဗို့အားအကွာအဝေးနှင့် အထွက်ပါဝါအပေါ်အခြေခံ၍ အချို့သော panels များ၏ qty ကို string အဖြစ် အစီအရီဖြင့် ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အပြိုင်ရှိ အချို့သောကြိုးများသည် လမ်းဆုံအတွက် PV mixer box သို့ ချိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ circuit breaker ၏ control နှင့် arrester ၏ကာကွယ်မှု, ထို့နောက် inverter သို့ feed ကို။
Solar Distribution Junction Boxes ၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်
1. CGC/GF002:2010၊ PV Array Junction Box နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
2. ချိတ်ဆက်ရန် ခွင့်ပြုနိုင်သော အများဆုံး ကြိုးတန်း 24 ခု၊ လိုင်းတစ်ခုစီ၏ Nominal voltage သည် 10A၊ အများဆုံး 15A ဖြစ်သည်။
3. စုစုပေါင်းအထွက်လက်ရှိသည် 250A၊ အမြင့်ဆုံးဗို့အားမှာ 1000Vdc ဖြစ်သည်။
4. ကြိုးတစ်ချောင်းစီအတွက်၊ မြင့်မားသောဗို့အား ဖျစ်ကာကွယ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်မှု။
5. PV မြင့်မားသောဗို့အားဖမ်းကိရိယာ အကာအကွယ် တပ်ဆင်ထားသည်။
6. PV မြင့်မားသောဗို့အား circuit breaker သည် output ကိုထိန်းချုပ်သည်၊ ဖိအားခံနိုင်ရည်ရှိသော DC1200V၊ fusing current သည် ရွေးချယ်နိုင်သည်
7. ပြင်ပတပ်ဆင်မှုနှင့်အညီ၊ ကာကွယ်မှုအတန်းအစား IP65
8. အဝေးမှဒေတာဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသော RS485 အပေါက်ကို ခွဲထုတ်ပါ၊ MODBUS-RTU ပရိုတိုကောကို ပံ့ပိုးပါ။
9. Built-in ပြီးပြည့်စုံသော ကာကွယ်မှု အချက်ပြ လုပ်ဆောင်ချက်၊ နှိုးစက် ဘောင်များ အမျိုးမျိုးကို ပရိုဂရမ် ချိန်ညှိနိုင်ရုံသာမက နှိုးစက် လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုစီကိုလည်း "On" သို့မဟုတ် "Off) ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
10. အန္တရာယ်ရှိသော arc သည် DC circuit ရှိ အန္တရာယ်ရှိသော arc ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အချိန်နှင့်တပြေးညီ၊ အန္တရာယ်ရှိသော arc တွင်၊ အချက်ပေးစနစ်သည် အလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး trip to switch ကို တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်ကာ ပြတ်သွားသည့် circuit ကိုဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းဖြင့်၊ မီးဘေးအန္တရာယ်၊ စသည်တို့ကို arc မှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Solar Photovoltaic DC Combiner Box အတွက် ကန့်သတ်ချက်
စနစ်၏အမြင့်ဆုံး DC ဗို့အား 1000V
အများဆုံးအထွက်ခလုတ် လက်ရှိ 360A
အများဆုံး အင်ဗာတာ MPPT N
စမ်းသပ်မှုအမျိုးအစား အဆင့်2ကာကွယ်မှု
ထည့်သွင်းရေစိမ်ခံဂိတ်၏ အရွယ်အစား PG9/PG11
output ရေစိုခံ terminal ၏အရွယ်အစား PG21~PG29
အထွက်ခလုတ် DC circuit breaker (စံနှုန်း)/
DC အထီးကျန်ခလုတ် (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)
MC4R ရေစိုခံချိတ်ဆက်ကိရိယာများ စံ
PV DC ဖျူး စံ
PV ရေလှိုင်းကာကွယ်ပေးသည်။ စံ
စောင့်ကြည့်ရေး မော်ဂျူး (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) ချန်နယ်တစ်ခုစီ၏ လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဘတ်စ်ကားဗို့အား၊ circuit breaker နှင့် lightning protector ၏ အခြေအနေ၊ box temperature ကို စစ်ဆေးပါ။
အရန်ပါဝါထောက်ပံ့မှု အရန်ပါဝါထောက်ပံ့မှု- AC85V~265V
ဆက်သွယ်ရေးမုဒ်/ပရိုတိုကော(ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) RS485 ဘတ်စ်ကား/စံ MODBUS-RTU ပရိုတိုကော
တားဆီး-ပြောင်းပြန်လုပ်ဆောင်ချက် (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) Modularized နှင့် encapsulated prevent-reverse diode တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။
Operating အပူချိန် -40°C ~ + 85°C
ခွင့်ပြုနိုင်သော နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ 0-95% ၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း ၊ အဆိပ်သင့်သော ဓာတ်ငွေ့ မရှိပါ။
အနံ x အမြင့် x အတိမ် (မီလီမီတာ)
hot Tags:: နေရောင်ခြည် ဖြန့်ဖြူးရေး Junction သေတ္တာများ၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်